Microsoft yakaburitsa MsQuic sosi kodhi inoshandiswa muHTTP / 3 | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakaburitsa kodhi yekodhi yeMsQuic, network network inoshandiswa kuHTTP3
Vagadziri veMicrosoft yakazivisa kuburitswa kweMsQuic library source code pamwe nekuitwa kweQuIC network protocol. Raibhurari iri muchinjika-chikuva uye inogona kushandiswa kwete paWindows chete asiwo paLinux uchishandisa Schannel kana OpenSSL yeTLS 1.3Uye zvakare, basa rinoramba richiwedzera kutsigira kwemamwe mapuratifomu mune ramangwana.
Iyo raibhurari yakavakirwa pane msquic.sys driver kodhi yakapihwa mukati Windows 10 kernel (Yemukati Kutarisa) kuvimbisa mashandiro ehurongwa hweHTTP uye SMB pamusoro peQUIC. Code inclusion inoshandiswa kuita HTTP / 3 pane yemukati Windows stack uye paNET Core.
Kuvandudzwa kweMsQuic raibhurari kuchaitwa chose paGitHub uchishandisa ongororo yeruzhinji, kudhonza zvikumbiro, uye nenyaya dzeGitHub. Zvivakwa zvakagadzirwa zvinoongorora chisungo chega chega uye chinodhonza chikumbiro kupokana neseti yemiedzo inopfuura 4000. Mushure mekudzikamisa nharaunda yekuvandudza, zvinorongwa kuti zvigamuchire shanduko kubva kune vanogadzira vekunze.
MsQuic inogona kushandiswa kugadzira maseva nevatengi, asi kwete ese mashandiro anotsanangurwa mune IETF kududzirwa aripo parizvino. Semuenzaniso, hapana rutsigiro rwe0-RTT, kufambiswa kwevatengi, Path MTU Discovery, kana server inosarudza kero kudzora.
Pakati pezvinhu zvakaitwa, optimization yekuita kwakanyanya uye kunonoka kushoma kunoratidzwa, kutsigira ini/ O asynchronous, RSS (Gamuchira lateral scaling), kugona sanganisa UDP yekupinza uye yekubuda hova. Iyo MsQuic kuitiswa yakaedzwa kuti ienderane neyekuyedza Chrome neEdge browser mabazi.
Iyo kugona kumisikidza kubatana kune chiriporipochoe (0-RTT, mune angangoita makumi manomwe neshanu ezviitiko, iyo data inogona kuendeswa nekukurumidza mushure mekutumira yekubatanidza setup packet) uye kuvimbisa kunonoka kushoma pakati pekutumira chikumbiro uye kugamuchira mhinduro (RTT, Round rwendo nguva).
Zvakare ine kukanganisa kwekugadzirisa maturusi izvo zvinoderedza kunonoka nekuda kwekutamisazve kwemapaketi akarasika.
Iko kushandiswa kweakakosha packet-chikamu kukanganisa-kugadzirisa makodhi kudzikamisa mamiriro anoda kuwedzeredzwa kweakarasika mapaketi data kanaKuziva hunyanzvi hwekufanotaura bandwidth mumativi ese kuve nechokwadi chakaringana pasuru yekuendesa yakasimba, kuitadzisa kuti isvike padanho rekusangana umo kurasikirwa kwepaketi kunoonekwa.
Yehumwe hunhu Quic kiyi:
Kuchengetedzeka kwepamusoro, kwakafanana neTLS (kutaura zvazviri, QUIC inopa kugona kushandisa TLS 1.3 pamusoro peUDP).
Kuyerera kwekuvimbika kudzora kunodzivirira kurasika kwepaketi.
Kwete kushandisa imwecheteyo kuteedzana nhamba kana uchidzosera pakiti, iyo inodzivirira kusanzwisisika pakusarudza mapaketi akagashirwa uye kubvisa nguva dzekubuda.
Kurasikirwa kwepaketi kunokanganisa kuendesa kwekuyerera chete kwakabatana nayo uye hakumise kuendesa kwedata mune yakafanana kuyerera kunoendeswa pamusoro pechizvino kubatana.
Iyo cryptographic block miganhu inoenderana neiyo QUIC packet miganhu, ichideredza mhedzisiro yekurasikirwa kwepaketi pakurongedza zvirimo zvemapakeji anotevera.
Iko hakuna matambudziko nekuvharira iyo TCP mutsara.
Tsigiro yekubatanidza chinongedzo, iyo inoderedza nguva yekumisazve kubatanidza kwevatyairi mbozha.
Iyo ine kugona kubatanidza epamberi nzira dzekudzivirira yekubatanidza kuzara.
Iyo inozvirumbidza inoshamisa mashandiro uye kuita kwekuita pamusoro peTCP. Kune evhidhiyo masevhisi seYouTube, QUIC yakaratidza kudzikiswa kwemakumi matatu muzana mukudzokorodza mashandiro kana uchiona mavhidhiyo.
Finalmente kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo About MsQuic kana kuda kutarisa kwainobva kodhi yekodhi, iwe unofanirwa kuziva kuti kodhi yacho yakanyorwa muC, iri muchinjika-chikuva, chinangwa chese, inogoverwa pasi peMIT rezinesi uye kodhi yakaburitswa inoitirwa paGitHub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Microsoft yakaburitsa kodhi yekodhi yeMsQuic, network network inoshandiswa kuHTTP3
Google ikozvino inopesana nekuwedzera-ons iyo spam
Redis 6.0 inouya neiyo itsva RESP3 protocol, yakawedzera rutsigiro, kumhanyisa uye zvimwe